Ikhwalithi ye-PCB Assembly - iPandawill Technology Co., Ltd.
IPandawill inenqubo yokulawula esemthethweni eqinisekisa ikhwalithi yawo wonke umkhiqizo ngesinyathelo sangaphambilini senqubo. Uhlelo lokulawulwa kwekhwalithi lubandakanya ukukhethwa kwabaphakeli, ukuhlolwa kokuqhubeka komsebenzi, ukuhlolwa kokugcina kanye nokwenziwa kwamakhasimende.
Olungenayo Quality Control
Le nqubo ukulawula abahlinzeki, ukuqinisekisa izinto ezingenayo, nokusingatha izinkinga zekhwalithi ngaphambi kokuqala komhlangano.
> Ukuhlolwa kohlu lwabathengisi nokuhlolwa kwamarekhodi ekhwalithi.
> Ukuhlolwa kwezinto ezingenayo.
> Ukuqapha Ukulawulwa Kwekhwalithi yezindawo ezihloliwe.
Ukulawulwa Kwekhwalithi Engaphakathi Kwenqubo
Le nqubo ilawula inqubo yokuhlangana neyokuhlola ukunciphisa ukwenzeka kwamaphutha.
> Ukubuyekezwa kwenkontileka yokuqala: ukuhlolwa kokucacisiwe, izidingo zokulethwa, kanye nezinye izinto zobuchwepheshe nezebhizinisi.
> Ukuthuthukiswa Kokufundiswa Kwezokukhiqiza: ngokusekelwe emininingwaneni enikezwa ngamakhasimende, umnyango wethu wobunjiniyela uzothuthukisa Umyalo Wokugcina Wokukhiqiza, ochaza izinqubo zangempela zokukhiqiza kanye nobuchwepheshe obusetshenziselwe ukukhiqiza umkhiqizo.
> Izilawuli Zenqubo Yokukhiqiza: landela imiyalo yokukhiqiza kanye nemiyalo yokusebenza ukuqinisekisa ukuthi konke okwenziwayo kulawulwa ngekhwalithi. Lokhu kufaka phakathi ukulawulwa kwenqubo nokuhlolwa nokuhlolwa.
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi Ephumayo
Le yinqubo yokugcina ngaphambi kokuba imikhiqizo ithunyelwe kumakhasimende. Kubalulekile njalo ukuqinisekisa ukuthi ukuthunyelwa kwethu akunasici.
> Ukuhlolwa kwekhwalithi kokugcina: yenza ukuhlolwa okubukwayo nokusebenza, qinisekisa ukuthi ihlangabezana nezincazelo nezidingo zeklayenti.
> Ukupakisha: ukupakisha ngezikhwama ze-ESD futhi uqiniseke ukuthi imikhiqizo igcwele kahle ukulethwa.